Raysul Wasaare Gaas oo Laga Dalbaday Inuu Raaligelin ka Bixiyo Hadal uu Shalay Jeediyey | Anti-Tribalism
← Wasaaradda Dastuurka DKMG ah oo Shaaca Ka Qaaday inaysan Wax Dhaqaale u Heyn Shirka Dastuurka Lagu Ansixinayo
Puntland Ma Dowladbaa Mise Waa Maamul goboleed? →
Raysul Wasaare Gaas oo Laga Dalbaday Inuu Raaligelin ka Bixiyo Hadal uu Shalay Jeediyey
Muqdisho Wednesday, April 25th, 2012 (MMG) – Gudoomiyaha Odayaasha dhaqanka ee beelaha Hawiye ee magaalada Muqdisho ayaa maantay si kulul uga jawaabay ereyol uu shalay warbaahinta ka sheegay Ra’isul wasaaraha xukuumadda KMG ahC/weli Maxamed Cali Gaas kaasoo uu ku sheegay in dadka diidan dastuurka qabyada ah ay yihiin dad raba inay isbaaro u dhigtaan dastuurka isla markaana aan waxba akhrin.
Gudoomiyaha Guurtida dhaqanka oo maantay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, isagoo cambaareeyey hadalka Ra’sul wasaaraha, wuxuuna ku tilmaamay inuusan u hadlin sidii qof Masuul ah, wuxuuna Gudoomiyaha soo bandhigay qodobo ay sheegeen ineysan la jaanqaadi karin Xeerarka Dhaqanka & Diinta islaamka ee ku jirta qabyo qoraalka dastuurka cusub.
“Runtii waa ceeb iyo nasiib daro in nin Ra’isul wasaare ah uu qowmiyad dhan yiraahdo dastuurka ayey isbaaro ku yihiin” sidaasi waxaa shirka jaraa’id maanta ka sheegay Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ahaa odayaasha maanta hadlay.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad wuxuu sheegay in Ra’isul wasaruhu uu iska indhatiray khaladaadka faraha badan ee ku jira dastuurka kuwaasoo haddii laga aamiso khatar ku ah dadka, diinta iyo dalka.
“Waxa meesha [dastuurka] ku yaal waa aragnay, waxaa ka mid ah inaan la sheegin Madaxweynah iyo Ra’isul wasaaraha inay Muslimiin yihiin iyo in kale. Sidaa soo kale waxaa la sheegay in jinsiyada Soomaaliya shan sano lagu qaadan karo oo iyadaa khalad kale ah” ayuu yiri Xaad oo intaa ku daray in dastuurka cusub uu horseedayo in dad aan xitaa Muslim ahayn ay Soomaaliya dal iyo dad ahaanba u sheegtaan.
Gudoomiye Xaad wuxuu kaloo ku eedeeyey raysul wasaaraha inuu bilaabay inuu isaga kala shaandheeyo ergada qabiilada ee 135 oday dhaqameed, wuxuuna Xaad sheegay in raysul wasaare Gaas uu rabo in ergada beesha Hawiye laga saaro dadka aragti ahaan taageersan madaxweyne Shariif.
Odayaasha dhaqanka waxay soo jeediyeen in Wasiika 1aad ee Dowlada KMG ah inuu raaligelin buuxda ka bixiyo hadalka uu shalay warbaahinta ka sheegay haddii kake loo qaadanayo inuu dad gaar ah ula jeeday.
Talaadadii shalay ayaa wareysi uu raysul wasaaruhu siiyey idaacadda VOA ayuu ku sheegay in dadka diidan dastuurka ay isbaarorabaan isla markaana iyagoon waxba akhrin ay iska diideen.